စကားလုံးများနှင့် စကားစုများကိုအထူးပြုခြင်း (Modifying Words and Phrases) - Myanmar Network
စကားလုံးများနှင့် စကားစုများကိုအထူးပြုခြင်း (Modifying Words and Phrases)
Posted by Language Republic on March 16, 2013 at 10:12 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ပြရာမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ စကားလုံးစကားစုတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ စကားလုံး စကားစုတွေဟာ တီထွင်ဖန်တီးတဲ့ စာပေတွေ၊ အစီရင်ခံစာတွေ၊ ဆွဲဆောင်ရေးသားဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ အခြား စာအမျိုးအစားတွေ ရေးသားရာမှာ အသုံးများပါတယ်။
အထူးပြုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ရေးသားချက်တစ်ခုမှာထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ပြဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ Investing in high-tech stocks is risky အဆင့်မြင့်နည်းပညာ စတော့ရှယ်ယာတွေမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံတာအန္တရာယ်များတယ် ဆိုတဲ့ အဆိုကို သဘောတူနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သဘောမတူဘဲလည်း နေနိုင်ပါတယ်။ သံသယဖြစ်စရာမလိုဘူး undoubtedly ဆိုတဲ့
စကားလုံးမျိုးကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဒီထင်မြင်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အယူအဆကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး သုံးနိုင်တဲ့ အခြား အထူးပြု စကားလုံးတွေ စကားစုတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(most) assuredly + adjective: အသေချာဆုံးကတော့ + နာမ၀ိသေသန
These investments will most assuredly help to build equity.
ဒီရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေက အစုရှယ်ယာတွေတည်ဆောက်ရာမှာအထောက်အကူဖြစ်မှာ သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
withoutadoubt + clause:
Withoutadoubt, this investment is risky.
ဒီရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကတော့ အန္တရာယ်များတာ သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
It is doubtful that + clause: သံသယဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်။
It is doubtful that we will succeed with this attitude.
ဒီသဘောထားမျိုးနဲ့ အောင်မြင်မယ်ဆိုတာကတော့ သံသယဖြစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါထင်မြင်ချက်ပေးတဲ့နေရာမှာ အခြားနည်းနဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်အောင် နေရာချန်ပြီး ပြောတဲ့စကားကို အထူးပြုပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဥပမာ There is hardly any doubt that we will succeed. အောင်မြင်မယ်ဆိုတာကတော့ သံသယဖြစ်စရာမရှိသလောက်ပါဘဲ ဆိုရင် အခြား အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူဖို့ နေရာကျန်ပါတယ်။
(hardly any doubt = သံသယဖြစ်စရာ မရှိသလောက် ဆိုတာဟာalittle room for doubt သံသယဖြစ်စရာနည်းနည်းလေးတော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။) ထင်မြင်ချက်ကို အထူးပြုဖို့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အခြား အထူးပြု စကားလုံးစကားစုတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
almost / nearly + adjective: အားလုံးနီးပါး/နီးပါး + နာမ၀ိသေသန
It's nearly impossible to makeamistake.
largely / mainly + noun: အဓိကကတော့ + နာမ်
It's largelyamatter of getting the facts right.
many ways / some ways + it/this/that, etc.: နည်းလမ်းအများ/နည်းလမ်းအချို့/နည်းလမ်းတစ်ရပ်ဖြင့် ----------------------- ဖြစ်သည်
In many ways it'sasure bet.
လောင်းကြေးစားကြေး လုပ်ရင် နိုင်မှာသေချာတယ် လို့ ပြောနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းအများ ရှိတယ်။
အချို့စကားလုံးတွေက ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အားကောင်းတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ မှားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်အောင်ပြောတဲ့
စကားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားကို ဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားလုံးထည့်ခြင်းအားဖြင့် အားကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ပြောဆိုချက်တစ်ခုအားကောင်းအောင်အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့အထူးပြုစကားလုံးစကားစု အချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
simply / just + adjective: ရုံမျှ + နာမ၀ိသေသန
It is simply wrong to believe that about John.
mere + noun: မျှသာ + နာမ်
That is mere distraction from the main point.
merely / only + the + first, last: မျှသာ + the + ပထမဆုံး၊ နောက်ဆုံး
This is merely the last inanumber of problems.
sheer / utter + noun: သက်သက်သော + နာမ်
The sheer idiocy of the project speaks for itself.
လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဟာ ပို၍ပို၍ မှန်ကန်တယ်လို့ ပြောတဲ့အခါမှာ ဒီစကားစုတွေကို အလေးအနက်ပြုဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ We have decided over and over again that we need to continue down this path. ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်သွားဖို့ လိုတယ်ဆိုတာကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောလိုရင်းအချက်ကို အလေးအနက်ပြုဖို့ အထောက်အကူပေးနိုင်တဲ့ အခြားစကားစု အချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
more than + adjective: ပို၍ + နာမ၀ိသေသန
It is more than likely he will fail.
သူ မအောင်မြင်ဖို့ကတော့ အလားအလာရှိတာထက်တောင် ပိုသေးတယ်
more and more + adjective: ပို၍ပို၍+ နာမ၀ိသေသန
I'm afraid it is becoming more and more difficult to believe you.
ယုံကြည်ဖို့ကတော့ ပို၍ပို၍ ခက်ခဲလာနေတာ မပြောမပြီး ပြောရတော့မယ်။
ထင်မြင်ချက်ပေးတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်စကားကို ပံ့ပိုးဖို့ ဥပမာတွေပေးတာကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
ဥပမာ It is more than likely he will fail. In the case of Mr Smith, he failed to follow-up and caused us to pay heavy fines. သူ ကျရှုံးဖို့ကတော့ အလားအလာရှိတာထက်တောင်ပိုနေပါပြီ။ မစ္စတာစမစ်ဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ဆောင်ဖို့ ပျက်ကွက်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့
ထင်မြင်ချက်ကို ပံ့ပိုးမှုပေးတဲ့ ဥပမာတွေ ဖော်ပြဖို့ အောက်ဖော်ပြပါ စကားစုများကို အသုံးပြုပါတယ်။
such as + noun: ကဲ့သို့ + နာမ်
Critics of this policy, such as Jack Beam of Smith and Sons, say that ...
စမစ်နဲ့သားများကုမ္ပဏီမှ ဂျက်ဘီးမ် ကဲ့သို့သော ဤမူဝါဒကို ဝေဖန်သူများက -------------------- ဟု ပြောကြားပါသည်။
This is an example of + clause: ဒါကတော့ဥပမာဖြစ်ပါတယ် + ၀ါကျကဏ္ဍ clause
This is an example of our need to diversify investments.
In the case of + noun: ဖြစ်ရပ်မှာကတော့ + နာမ်
In the case of Ms Anderson, the company decided to ...
မစ္စအင်ဒါဆစင်ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှာကတော့ ကုမ္ပဏီက -------------- ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ အစီရင်ခံစာ ဒါမှမဟုတ် အခြားဆွဲဆောင်ပြောဆိုတဲ့စာသား အဆုံးမှာ ထင်မြင်ချက်ကို အကျဉ်းချုပ်ဖို့ဖော်ပြပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဥပမာ - In the end, it is important to remember that ... နောက်ဆုံးတော့ ----------------- ဆိုတာကို သတိပြုမိဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ထင်မြင်ချက်ကိုအကျဉ်းချုပ်ဖို့ ဒီစကားစုတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
All in all: ခြုံလိုက်ရင်တော့
All in all, I feel we need to diversify due to ...
ခြုံလိုက်ရင်တော့ ---------------- ကြောင့် စုံလင်အောင်လုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
In the end: နောက်ဆုံးတော့
In the end, we must decide quickly to implement this plan.
နောက်ဆုံးတော့ ဒီအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ မြန်မြန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချရပါမယ်။
In conclusion: နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်
In conclusion, let me repeat my strong support for ...
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် ကျွန်တော့အနေနဲ့ -----------ကို အထူးထောက်ခံပါကြောင်း ထပ်ပြီးတော့ ပြောပါရစေ။
Permalink Reply by aunghtedmyat on March 20, 2013 at 19:58
Permalink Reply by Myint bobo on March 26, 2013 at 20:54
I would like to suggest you to upload the English lessons with the pdf version so as to download and save in the computer to learn whenever the time allows.
Permalink Reply by snow white on August 22, 2013 at 11:43
strong support for Myint bobo reply...
Permalink Reply by prakash poudal on June 17, 2013 at 0:17
Permalink Reply by tin nilar win on July 4, 2013 at 11:09
Permalink Reply by houng ning on October 19, 2015 at 13:49
I need pdf file to be download, thanks!